Global Voices teny Malagasy » Iran: Eritreritra Momba An’i Gaza sy Isiraely · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Novambra 2012 15:12 GMT 1	 · Mpanoratra Arseh Sevom Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Politika
Nalefan'i Peyman Majidzadeh  voalohany tao amin'ny Arseh Sevom  ny lahatsoratra
Ny fanohanana ny Palestiniana no politika ivelany laharam-pahamehana ho an'i Iran araka  ny filazan'ny mpitondratenin'ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Iraniana, Ramin Mehmanparast. Nilaza izy fa andraikitry ny firenena Islamika no manohana ireo Palestiniana ao Gaza ary manolotra fanampiana maha-olona.
Efa tamin'ny Aogositra 1979 izany fihevitra ofisialin'i Iran izay manohitra ny sionisma izany raha tamin'ny firaisankina miaraka amin'ny Palestiniana, nanambara  ny Ayatollah Khomeini fa andraikitra ara-pinoana ho an'ireo Miozolomana rehetra ny fahafahan'i Jerosalema. Isan-taona, tohanan'ny governemanta Iraniana, ankalazainy ary karakarainy izany andron'ny hetsi-panoherana nataon'ny mpanohana ny Palestiniana izany tamin'ny Zoma farany tamin'ny Ramadam. Niparitaka manerana ireo firenena hafa ihany koa andron'ny Quds ary nanjary ohatra amin'ny firaisankina miaraka amin'ny Palestiniana izay voafehy. Na dia Iraniana an-tapitrisany aza no mamonjy izany filaharam-be isan-taona izany, mampametra-panontaniana  ny maha-vokatry ny fo tsy misy fitakany fandraisan'izy ireo anjara.
Telo taona lasa izay, tsy ny fanafoanana ny zo any an-trano ihany no notsikerain’ ny hetsi-panoherana taorian'ny fifidianana filoham-pirenena izay nampifaditra fa ny fitsabahan'i Iran any amin'ny firenen-kafa. Hoy antsoantsom-pihetsiketsehana “Tsy ho an'i Gaza. Tsy ho an'i Liban. Ho an'i Iran ihany ny fiainako.” Voatsikera mafy izany antsoantso izany ary fanahy inian'ny manampahefana Iraniana tsy noraharahiana tamin'izany fotoana izany. Mampiseho ny fitakian'ny fiarahamonim-pirenena isian'ny fandraisana andraikitra mazava eo amin'ny governemanta izany sy fitsikerana momba ny politikany amin'ny fitsabahany ny raharahan'i Hamas sy Hezbollah.
Sokajiana ho mpanohana ny sionista ireo izay tsy miaraka amin'ny politikan'ny governemanta Iraniana. Midika te-ho lasibatra ny manameloka ny Hamas imasom-bahoaka. Niharan'izany toe-javatra izany ny Birao ho Fanamafisana ny Firasainkina [Daftar-e Tahkim-e Vahdat], fikambanan'ny mpianatra Iraniana sady manohitra ny Hamas no manohitra an'i Isiraely tamin'ny ady farany teo tao Gaza ary nantsoin'i Kayhan  hoe “Radio Isirael y”, gazety mpandala ny nentin-drazana sady mifandray amin'ny biraon'ny Lehibe Faratampony.
Tao amin'ny gazety Zamaneh Tribune, mpanoratra ny tsy olantsika i Palestina  [fa] nanoratra hoe:
Na dia eo aza ny politika mampijaly, misy ny fanohanan'ny fiarahamonina ao Iran an'i Palestiniana. Mampiseho ny hetsika teo anoloan'ny masoivoho Isiraely ao New York ity sary ity izany natrehin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrona Havaar , ary manohitra ny ady, ny fanasaziana sy ny famoretana ataon'ny fanjakana .
Sary avy amin'i Havaar : fisantaran'andrakitry ny Iraniana ho fanoherana ny ady, ny fanasaziana sy ny famoretana
Taminà lahatsoratra antsoina hoe Ratram-perin'i Palestina, Mikhak  [fa] nandresy lahatra amin'ny fanohanana ny vahoaka Palestiniana, hoy izy:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/11/30/41963/
 Sokajiana : http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news1/17268/
 Radio Isirael: http://irandialogues.org/?p=1446
 tsy olantsika i Palestina: https://tribunezamaneh.com/archives/6292